ओली–प्रचण्डका शनिबारे किस्सा : कतै हाँसो कतै ग्लानी ! « Ok Janata Newsportal
ओली–प्रचण्डका शनिबारे किस्सा : कतै हाँसो कतै ग्लानी !
काठमाडौैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार मोरङको विराटनगर पुगे । उनले त्यहाँको जनसभामा आफ्नो भाषण राखे । केही समय सुवासचन्द्र नेम्बाङ मञ्चमा आएर ओलीले आज खास घोषणा गर्दैछन् भनेका थिए । तर, ओलीको अधिकांश समय सभामुख र उपराष्ट्रपतिको आलोचनामै खर्चियो ।
उनले नयाँ विषय पनि प्रवशे गरे । उनले भने प्रतिनिधि सभा विघटन नभएमा हामी आन्दोलनमा जान्छौ । यो शनिबारको नयाँ र प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म नबोलेको कुरा थियो ।
यता, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नुपूर्व देश निर्वाचनमा गइसकेको सन्देश दिन नेकपा ओली पक्षले विराटनगरमा शनिबार सभा ग¥यो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका कार्यकर्ता तथा सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै प्रकारको षड्यन्त्र, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भए आन्दोलनमा जान्छौँ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत दाहाल–नेपाल पक्षले प्रयोग गरेको शब्दको हो, सेटिङ । ओली पक्षका नेताहरुले देशभर नै ‘हाम्रो सबैतिर सेटिङ भइसकेको छ, संसद विघटन सदर हुन्छ, सूर्य चुनाव चिन्ह पनि हाम्रै हुन्छ’ भन्दै हिँडेको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षका शीर्षनेताहरुले खबरदारी गर्दै आएका छन् ।
तर, शनिबार विराटनगरमा ठीक उल्टो सुनियो । चुनाव हुन्छ, हुन्छ भन्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सेटिङ’मा संसद पुनस्र्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्र्थापना भए सांसद किनबेच तथा सरकार बनाउने–ढाल्ने खेल हुने र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सिङजुरो हाल्दिएपछि प्रचण्ड अहङ्कारी बनेको टिप्पणी गरेका छन् । ।
जनसभालाई सम्बोधन गर्दै ओली पक्षका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अस्थिरता सृजना गर्न खोजिएपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भएको बताए ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ नभएको बताउँदै आएका छन् ।
यसैसाता गृहजिल्ला चितवनमा पुगेर पनि उनले प्रधानमन्त्रीको लोभ नभएको बताए । के अब संसद पुनस्थापना भयो भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दैनन् त ?
शनिबार अनलाइनखबरले प्रचण्डसँग यसबारे थप स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दा उनले संसद पुनस्थापनापछि प्रतिपक्षी दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु उचित हुने प्रष्ट्याए ।